Ahoana ny fomba fanaovana fikarohana fiara ao Kenya - Victor Mochere
Rehefa te hividy fiara efa niasa eny an-toerana ianao dia iray amin'ireo dingana voalohany atao dia ny fisavana fiara mba hahafantarana ny tantaran'ny fiara, hahafantarana ny fiara dia voasoratra ara-dalàna ary hanamarina ny tena tompon'ny fiara. Izany dia dingana tena lehibe amin'ny fividianana fiara avy amin'ny olon-kafa, orinasa na fikambanana. Raha fikambanana mpampindram-bola ianao ary maka bokim-bola ho antoka, dia fomba fanao mahazatra izany ary dingana voalohany amin'ny fanekena fiara ho fiarovana amin'ny fampindramam-bola ataon'ny mpanjifa iray manokana.
Ireto ny dingana amin'ny fanaovana fikarohana fiara ao Kenya.
Midira amin'ny Portal NTSA TIMS. Raha tsy manana kaonty ianao dia afaka mamorona iray amin'ny fipihana ny 'Register'
Safidio ny 'Make Application'
Safidio ny 'Fisoratana fiara'
Safidio ny 'Search for a motor vehicle (copy of files)'
Kitiho ny 'Apply Now' ary ampidiro ny laharan'ny fisoratana anarana fiara tsy misy toerana, ohatra, 'KAA381A'
Fidio ny fomba fandoavanao. Ity serivisy ity dia mitentina Ksh 550
Araho ny toromarika ao amin'ny tranokala mba hisintonana ny fampahalalana momba ny fisoratana anarana
Fanamarihana: Ny kopia fikarohana fiara NTSA dia hanome anao ireto antsipiriany manaraka ireto, izay ahafahanao manamarina amin'ny antontan-taratasin'ny mpivarotra alohan'ny hividianana:
Modely amin'ny fiara